Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa guyyaa har’aa ooleen, jecha amantaafi waakkii galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti namoota himatanii dhaggeeffatee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsManni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa guyyaa har’aa ooleen, jecha amantaafi waakkii galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti namoota himatanii dhaggeeffatee jira.
Manni murtiichaa olmaa torbaan dura ooleen, himatamtoota dhaddacharratti dhihaatanii jecha amantaafi waakkii kennatan keessa kanneen gaafas hin argamne har’atti beellamuunsaa ni yaadatama.
Olmaa dhaddacha har’aatiinis, Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Haamzaa Booranaafi Obbo Shamsaddiin Xahaa akkasumas Obbo Alamaayyoo Galataa mana murtiitti dhihaachuun jecha amanataafi waakkii kennachuu isaanii Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Ibsaa Gammadaa OMN-tti himanii jiru.
Akka Obbo Ibsaan jedhanitti, himatamtoonni guyyaa har’aa beellamarratti dhihaatanii jecha amantaafi waakkii kennatan hundinuu, yakka ittiin himataman waakkataniiru.
Obbo Jawaar Mohammad galmee himannoo isatti baname tokko tokkoon ibsuun, akkaataa himatameefi dhugaan qabatamaa jiru waliif faallaa ta’uu mana murtiif ibsuusaa Abukaatoon isaanii Obbo Ibsaan OMN-tti himaniiru.
“Ani nama qabsoo karaa nagaatti amanu ta’uurra darbee, hayyoota idiladdunyaa qabsoo karaa nagaatti amanan Yuunvarsiitii gurguddaa keessa jiran irraa qoradheen qabsoo karaa nagaatti seene. Yakki ani ittiin himatame, yakka sobaati.” jechuun yaada kennachuu Obbo Jawaar kan himan Abukaatoon isaanii kun, “kan himatame nuyi osoo hin taane, kaayyoo qabsoo Oromoo fi Oromummaadha” jechuun himannoo itti dhihaateera biliisa ta’uu mana murtiif himuu OMN Abukaatoo kanarraa odeeffatee jira.
Gama biraatiin Obbo Baqqalaa Garbaas, yakka ittiin himataman hedduun isaa soba ta’uu dubbachuudhaan, himannoo sana keessaa muraasa garuu dhuguma dubbachuufi gochuu isaanii amananis, “wanti ittiin na himatan kun mirga uumamaafi heerri naaf kennedha” jechuun dubbachuu isaanii Abukaatoon hidhamtoota kanaa Obbo Ibsaa Gammadaa himanii jiran.
“Sirna nafxenyaa nutti hin deebi’u’ jette jechuun himannoo natti banameef, eyyee dhuguma jedheen jira. Ammas ammoo nan jedha sirni kun nutti hin deebi’u. Sirni kun saba biyyaa kanaa keessaa ka bakka bu’u hin qabu. Kana balaaleffachuun ammoo yakka nama himachiisu miti.” jechuun dubbachuu isaanii OMN odeeffatee jira.
Obbo Haamzaa Booranaas, yakka ittiin himatame waakkachuusaafi dhimma saboota amantaan qooduufi walitti buusuu jedhuuf yaada waakkii kennachuusaa akkasumas miseensi maatiisaa amantaa garaagaraa hordofuu isaanii mana murtiif ibsuun, “gocha saboota walitti buusu raawwachuun, aadaan kiyyas, amantaafi haalli ani itti guddadhes naaf hin hayyamu” jechuun dubbachuusaa Obbi Ibsaan OMN-tti himaniiru.
Obbo Shamsaddiin Xahaa fi Obbo Alaamaayyoo Galataas yakka ittiin himataman waakkachu isaanii kan odeeffanne yoo ta’u, manni murtichaa jecha waakkiifi amantaa himatamtoota kanaa guutummatti dhaggeeffatee xumuruudhaan ragaa abbaa Alangaa dhaga’uuf beellama walitti fufaa qabaachuusaa Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Ibsaa himanii jiru.
Dhaddachi itti aanuuf, Bitootessa 28, 29, 30 bara 2013 dabalataanis ji’a itti aanu Eebila 5, 6, 7, 12, 13 fi 14 bara 2013-tti ragaa abbaa Alangaa dhaggeeggafachuudhaaf manni murtii beellama qabatee jira.